Inqubomgomo Yobumfihlo - Ukukhetha Okuphephile
Inqubomgomo Yemfihlo Micael Engrácia 2017-06-27T06:25:51+00:00
Inqubomgomo Yobumfihlo ye Khetha okuphephile
Yonke imininingwane yakho yomuntu siqu eqoqwe izosetshenziselwa ukusiza ukuvakashela kwakho kusayithi lethu kube okukhiqizayo futhi kujabulise ngangokunokwenzeka.
Isiqinisekiso sokuthi imfihlo yedatha yomuntu siqu yabasebenzisi besayithi lethu kubalulekile kuKhetho oluPhephile.
Yonke imininingwane yomuntu mayelana amalungu, ababhalisile, amaklayenti noma izivakashi abasebenzisa Khetha Vikela kuzothathwa ngokuhambisana Data Protection Umthetho we-Personal 26 1998 Okthoba (uMthetho No. 67 / 98).
Ulwazi lomuntu siqu oluqoqwe lungabandakanya igama lakho, ikheli le-imeyli, inombolo yocingo kanye / noma inombolo yefoni yeselula, ikheli, usuku lokuzalwa kanye / noma enye.
Ukusetshenziswa kokukhetha okuphephile kuthatha ukwamukelwa kwakho kwalesi Sivumelwano Sobumfihlo. Ithimba le-Segura linelungelo lokushintsha lesi sivumelwano ngaphandle kwesaziso esandulele. Ngakho-ke, sincoma ukuthi ubuyekeze inqubomgomo yethu yobumfihlo njalo ukuze uhlale usesikhathini.
Njengamanye amawebhusayithi, siqoqa futhi sisebenzisa ulwazi oluqukethwe kwezikhangiso. Ulwazi zikhangiso zihlanganisa IP (Inthanethi), i-ISP yakho (isevisi internet umhlinzeki, ezifana Sapo, Clix, noma ezinye), isiphequluli wayejwayele ukuvakashela indawo yethu (ezifana Internet Explorer noma Firefox), isikhathi sokuvakashelwa kwakho nokuthi yiziphi amakhasi owavakashele ngaphakathi kwewebhusayithi yethu.
I-Cookie DoubleClick Dart
I-Google, njengomthengisi wesithathu, isebenzisa amakhukhi ukukhombisa izikhangiso kwiwebsite yethu;
Nge-cookie ye-DART, i-Google ingabonisa izikhangiso ngokususelwa ekuvakasheleni umfundi owenziwe kwamanye amawebhusayithi ku-Inthanethi;
Abasebenzisi bangakhubaza i-cookie ye-DART ngokuvakashela ubumfihlo benethiwekhi yokuqukethwe nezikhangiso ze-Google.
Amakhukhi nama-web beacons
Sisebenzisa amakhukhi ukugcina ulwazi, njengezintandokazi zakho lapho uvakashela iwebhusayithi yethu. Lokhu kungabandakanya ukuqubuka okulula, noma isixhumanisi sezinsizakalo ezihlukahlukene esizihlinzekayo, njengezinkundla.
Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa nokukhangisa kweqembu lesithathu kwiwebhusayithi yethu ukusekela izindleko zokugcinwa. Ezinye zalezi abakhangisi zingasebenzisa ubuchwepheshe ezifana namakhukhi kanye / noma ama-web beacons lapho ukukhangisa kusayithi lethu, okuyinto uyothumela futhi lezi abakhangisi (njenge-Google ngokusebenzisa i-Google AdSense) futhi ukuthola ulwazi lwakho lomuntu siqu, olufana nekheli le-IP, I-ISP yakho, isiphequluli sakho, njll. Lo msebenzi ngokuvamile usetshenziselwa i-geotargeting (bonisa ukukhangisa kwe-Lisbon kuphela kubafundi baseLisbon isibonelo) noma ubonise ukukhangisa okuhlosiwe kumhlobo womsebenzisi (njengokubonisa ukukhangisa kokudlela kumsebenzisi ovakashela amasayithi amaningi wokupheka, isb. ).
Wena ubambe amandla ukuvala amakhukhi wakho ohlelweni lwakho, noma ukulawula izintandokazi ezinhlelweni Anti Virus amathuluzi, ezifana Norton Internet Security. Noma kunjalo, lokhu kungashintsha ukuthi uxhumana kanjani newebhusayithi yethu, noma amanye amawebhusayithi. Lokhu kungase kuthinte noma ungavumeli ungene izinhlelo, noma amasayithi kwezigcawu wethu nakwamanye amanethiwekhi.
Izixhumanisi Zamasayithi E-Third Party
Ukuzikhethela okuphephile kunamanye amawebhusayithi esikholwa ukuthi angaqukatha ulwazi / amathuluzi awusizo wezivakashi zethu. Inqubomgomo yethu yobumfihlo ayifakiwe kumawebhusayithi wesithathu, ngakho-ke uma uvakashela enye indawo kusuka kuwebhusayithi yethu kufanele ufunde inqubomgomo yobumfihlo efanayo.
Asisibophezele inqubomgomo yobumfihlo noma okuqukethwe okwamanje kulawo masayithi.